Taariikhda My Butros » Dog Walker ayaa
Last updated: May. 21 2020 | 10 min akhri
Nina lahaa si aad u aragto Daniel. Waxay u socday inay qaataan dibi oo ay geesahooda, ama in ka badan ugu macneeyeen, eeyaha by leashes ay, oo aad hesho isagoo dhamaystiran dareenka, xitaa haddii ay lahaan lahayd in la sameeyo nacas wadarta nafteeda ah, kuwaas oo ahaa, Runtii, runtii, lama huraan.
Sidaas daraaddeed waxay la qorsheeyay dhacdo eey-socodka gaarka ah. Maanta, halkii waxaa isku qasida habka caadi sameeyey, wata eeyo nooc kasta, ayay u qorsheysay in ay qabtaan wax yar sare Yuppie-eey cad. Waxay qaadatay qosolsiiyo qaar ka mid ah iyada oo jadwalka iyo qaar ka mid ah finagling la Suki, eey kale Wadaha ay ogayd ka orod eey kuwaas oo macaamiishu ay u muuqdeen in ay noqon eeyaha cutesy ah, kala duwan yar iyo kuwa lahaa Nina ka wakhtigaas markii u tagtay inay Hawaii on jajuubi ah daqiiqadii ugu dambeysay oo la weydiiyay Nina in la buuxiyo iyada.
Nina marnaba sheegi kartaa farqiga u dhexeeya, kuwaas oo eeyaha haddii aanay calaamad ah oo aan caadi ahayn, sida dhegta bidix maqan Stella ee, ama Jedi ee balastar bidaarta inuu sinta bidix. Iyada Si, Kulli way ka wada eeyaha cad yar, marka laga reebo Cockapoos, taas oo run ahaantii ahaa cute iyo smart, laakiin waxa kale ayaad filaysaan ka mutts, taas oo ah waxa Cockapoos dhab ahaantii. Daahirane la rijeynaya in yar oo eeyaha cad u muuqdaan in la iska leh doqomo ah oo u malayn of sida accessories cute by, sababta oo ah waxay tahay yar yar oo aad u qaadan kartaa diyaarad ama makhaayad. (Iyadu waa inaanay sameeyey, Si kastaba ha ahaatee, xukumin kuwa ay leeyihiin hal maxaa yeelay waxay ahayd hypo-xasaasiyad. Taasi waxay ahayd sabab caafimaad, sababta kaliya ee la aqbali karo in eey leedahay.)
Laakiin xoqin milkiilaha kasta oo ka mid ah eey cad yar oo aad ka heli doontaa waalid ah oo dhimirka oo aaminsan in ay sirdoonka waa gaar ah oo gaar ah, oo waxaad u dhashay khilaafka, si faahfaahsan, dhexeeya Bichon ah iyo Malta a, ku saabsan, Dabcan, Nina siin karaan shire ah.
Laakiin, muuqaal hadlayay, sida khariidad, waxay ahaayeen kuwo hortaada ah. Waxay iyaga ka qaaday in kaydka, rajeynaya waxay u ordi lahaa Daniel galay. Waxay ogaa inuu subax kasta ku soo orday oo sida xaqa ah wuu ka tegey. Saaka ayaa waxaa la soo ururaan, xataa waddada faras eeyaha in ay isticmaali ah. Qof walba raadinayey iyada, dhoola, fiiqid, at hortiisa la jeclaysto. Laakiin Ilaah ha naga fogeeyo iyadu waxay isticmaalaan ilaa bilaabeen orod raad ee xayndaabka. Joggers ahaayeen motherfuckers celceliska markuu u yimid in eeyaha, strollers ilmaha, socodsiiyaha ama xitaa kursiga curyaamiinta ama, oo iyadu ma aysan haysanin tamar inaan ku doodeen in saaka, gaar ahaan xiran, kuwaas oo kabo cute cusub kaas oo lagu iyada oo ay ku dhinteen.
Sida ay Jermalka tunnel ee caaradda koonfureed ee kaydka, eey u yaqaanaan baxeen oo mugdi ah. Waxay ahayd Sid. Oh shire, maleeyeen Nina, sida uu si toos ah kumyadu iyada, halkan uu yimaado. Waayo, meesha waxaa jiray Sid, waxaa jiray Daniel. Oo iyada wadnaha bilaabeen inay garaacaan boqol thumps labaad ah, oo dhoola lama filaan ah helay hab gal wejigeeda, sida uu iyada gacanta u kacay inuu wax la simi timaheeda, oo dabadeedna iyada maaliyada, Tirtiraha dhididsan ka wejigeeda.
Kolkaasay ku tidhi isagii arkeen. In a t-shirt iyo daba gaab, timaha uu sida uu soo giringiriyey kaliya ka degaysid sariirta, orodka la headphones iyo ciyaaryahanka MP3 ah ee gacantiisa bidix, maskaxdiisa si cad on music ah. Waxa uu ku orday iyada xagga aan arkay.
Ilaa iyo inta uu sameeyey. Ka dibna, dhoola qarxay guud ahaan wejigiisa, uu indhaha crinkle, uu dhabanada la godmeen. Waxay ahayd adag tahay in la seego. Waxay ay dhooban yihiin kow iyo toban yar eeyaha cad, dadka nooca u muuqdaan in ay qaadaan iyo coddle. Waxay u muuqatay saaxirad wanaagsan oo xagga woqooyi ka, hareereysan bichons halkii munchkins. Oo iyana waxay ugu xirnaa darafkii aad u gaaban halkii iyada gaab caadiga ah iyo nooc ka mid ah soo dhawaw peasanty qaawi ah halkii ay iyada jaamacadda halakeeyey caadiga ah ee t-shirt oo ilaah maydhan biyaha kabo raaxo halkii kabaha iyada.
“Daniel!” iyada ruxruxo isaga si.
Wuxuu madax iyada xagga, maxaa yeelay hadda, in aanay iyadu socday ayaa waxaa meel kasta. Kuwa yar oo eeyaha ayaa macno socda wareegyada hareereeya. Waxaa laga yaabaa in iyada ku dhici lahaa (ma in ay rajeyneysa inay waxyeelo) oo uu ku khasbannahay in aan iyada qaado (laakiin tani ma ahan wax xun).
“Hey Nina.” Oo haddii Idin, isna wuxuu u noqday halis ah, ku dhawaad ​​daran. Haddii iyadu ma ay ogayn fiican, iyadu ka fekerayey uu pissed. Ma wuxuu ogaan Waxayna ahayd gurigiisa ku yaal meelo ayay tahay in aan la? Sida uu soo dhawaaday iyada, ayuu wuxuu soo qaatay headphones uu off, daynin ku deldel luqunta. Waxa uu riixi off ciyaaryahan MP3 ah.
“Sida aad ka ambabaxay. Maxay aad halkaa ku leedahay, toban frieze bichon?” weydiiyay Daniel. Markaasuu Muusooday, sida uu helay sida dhow iyada sida uu kari, siiyay ciidamada ku hareeraysan.
“Waxaan ahay wacdaro. Laakiin dhab ahaantii, Waxaan halkan mid bichon leeyihiin, halkan mid, Star. Taasi waa Zardoz, bichon / mix yorkie ah, halkaas baafka ku yiilna. Waxaan haystaa laba chi-saxaroodaan, Sam iyo Dave, midig waxaa la pink qaansooyin yar, Suxuunta, cockapoo ah, Jackie O. iyo John F., labada Tulears suuf. Sidoo kale, Annie, apso lhasa ah, eey ka jahannamada. Waad ogtahay waxa? Waxay xirto xafaayadda doggie markii iyada guriga. Ma aha dhalmada. Oo kuwii saddex malteses? Taasi waa Larry, Curly iyo Moe. Yuppie Eleven Eyga dhan oo isku xigta.”
“Sidee ku ogaan kartaa? Yaa ka oo, Waxaan ula jeedaa. Dhammaantood waxay isu ekaatay ii.”
“Waxaad aad doggist! Hana ku dhihina ësome of saaxiibo aad ugu fiican are'Ö”
Wuxuu ku qoslay, sida uu hoos u eegay. Cidiyaha Her ayaa rinji pink ah daalanaayeen iyo in kastoo cagaheeda ahaayeen wax yar gnarly iyo cusubi, ayay dayday oo xasaasi ah oo la jecel yahay marka la barbar dhigo iyada fiirin caadiga ah ee rookaha-gabar-la-eeyaha. Ma hubo in taas eegi uu si fiican u jeclaa.
Nina ahaa si yaabay oo ku faraxsan, iyadu si dirqi ah nafteeda ku jira ayaa laga yaabaa. “Waxaad dareentay. Waxaan ula jeedaa–“
Waxaa soo shaqeeyay, Nina maleeyeen inay ku. Waxay dareentay casri ah oo ku saabsan leashes iyada. 'Joogo qof walba. Just joogo hal daqiiqo, fadlan.”
“Waxaad ka eegi fiican.”
Nina hoos u eegin iyada suulasha ka dibna dib ugu soo Daniel. “Waad ku mahadsan. Sidaas aad sameyn. Waxaan meanÖ”
“Laakiin waxa uu helay in ay adag tahay in la socon in kabaha kuwa.” Oo haddana wuxuu eegay cagaheeda kabo strappy ay ka dibna at lugaha iyada dhashay ka dibna galay indhaheedii. Waxay arkeen isaga arko, oo uu soo jeedsho.
“Well, Waxaan si fiican u heli eeyaha kuwaas socday oo guriga.” Waxay ahayd nacas ah wadarta? Maxaad uma ay ku waani isaga of shaqada? Ujeedada munaasabadan ayaa si aad u hesho inuu ka fekero iyada oo aan iyada.
“Taasi waa xaq. Waad ka shaqeeya.”
Waxay afuufay. Sidaas ayay ula taaheen iyo tagtay waxaa la.
“Waxaan soo gaaray Sid Qadeyn, xaq u?”
Waxa uu lulmoodeen. “Waxaan aad kulan. Sidaas, mahad.”
“Sure, waa shaqadeyda.” Waxaan aad bixin lahaa inuu ii ogolaado inaan qaado Sid.
Markaasaa Daanyeel ku yidhi, “Waxaa la yaab leh in dadka sida eeyaha kuwaas. Waxay tahay cute, laakiinse iyagu ma ay soo qabtee. Waxay tahay sida caruusadaha.”
“Haa, sidoo, dadka jiran tahay,” ayuu yiri Nina.
Kor buu u toosan oo wax fiiriyey at iyada. “Waxay yihiin,” ayuu yiri, indhihiisa squinted sida haddii isku dayaya in ay iyada ku dhow arkaan. “Waxay Xad.”
Waxay la yaabay. “Waxa ay booqan,” ayay tidhi, daafac.
“Oh ay sameeyaan?” Waxay ka yaabiyeen iyada, fikirka isaga oo joogay ugu Mr. Chandler ee, ee magaceeda uu ku computer.
“Waxay jiifsan,” ayuu yiri Nina, fekerayo sababta uu, qareen, la baaraya lahaa Mrs. Chandler in meesha ugu horeysa.
“Waxay Galay dadka ee u gaarka ah.”
“Sida xaqiiqda ah,” Nina heshiiyay.
Waxay kasta oo kale oo si xun. Eeyaha ayaa ku sii nervous. Annie waxaa dhuuqista Sid ee tureen iyo Moe waxaa dhuuqista Annie ee tureen laakiin Sid ma aysan xiiseyneynin dhuuqista tureen qof ee. Waxaa kaliya uu doonayay in jahannamada sare way ka yar ratdogs cad sida ugu dhaqsaha badan.
“Waxaad si fiican u tagaan,” Nina yiri. “Sid ma eegto oo aad u faraxsan.”
Sid ahaa sita ilkaha iyo gurxamayo, hackles uu kor u, jiidday xannibmay.
“Waxa uu ganaax. Socda ila,” ayuu yiri Daniel. “Kaalaya.”
“Kaalaya!” Wuxuu ahaa qirtay.
Oo sidaas daraaddeed ayay ku socdeen, agagaarka kaydka wada eeyaha darsin, Daniel haysta Sid uu gacanta ka baxsan leh.
“Bal ii sheeg,” ayuu yiri. “Maxaad u socdaan eeyaha?”
“Waa maxay sababta aan? Maxaa ila habboon inaan qabto? A dhabta ah shaqo? Ma in waxa aad u jeedo?”
Waxa uu iska indho iyada defensivness. “Well, ayaa aad had iyo jeer ahaa eey wade?”
“Waa maxay sababta, wax qalad ah in la noqdo eey wade?” Muxuu qof u qaadan eey socodka in waxa aad sameyn halka ay ku guuldareysteen at waxa aad rabto inaad sameyso.
“Ha, I”m kaliya cajiib ah. Ma aha in okay?”
“Just ah ilaa hal sano. Sorry. Saaxiibkay, Oo cad, ay ku baxdo L.A. ku meel gaar ah, waxaana qaatay wax ka badan iyada, ku meel gaar ah.
“Aan si ku meel gaar ah, sanad-dheer shaqo this. Oo xaggee baad ka shaqeeyaan ka hor?”
“Random House. Jile.”
“Waxaad u dhiibay up for this?”
“Ma ahayn wax badan in la siiyo ilaa. Marka laga reebo hooyaday. Waan ka qaatay guusha ay raacday iyada.”
“Waxaad tahay gabadh daran.”
Waxa ay lahayd si uu u eego isaga si aad u ogaato haddii uu dhalmada ama ma. Waxa uu ahaa. Waxay dib u dhoola isaga.
“Waa inaad xoogaa lacag fiican. Markii la tixgaliyo waxa aan aad bixiso, oo tarma in ay sida badan? Waxaad heysanaa badan oo eeyaha, xaq u? Waxaa kale oo caddaan ah oo dhan, xaq u?”
“Okay aan sameeyo.”
“An ganacsi lacag caddaan ah oo dhan. Taasi waa wax cashuur bixiyayaasha lahayn waa in aan.”
“Oo waxa aad ku saabsan? Waxaad tahay dhagax dab ah–?” Waxay isku dayeen inay ku joojiyaan gaariga, laakiinse uu u soo dhawaado.
Indhihiisu waxay noqotay mid wangsan oo dhuuban oo dhoola. “Waxaad odhan kartaa. Ma ahan eray xun. Ku celi iga daba: Qareen. Kaalaya.”
“Lawyer,” ayay tidhi oo labadooduba way ka jeedsadaan.
“How'd aad u ogaato?” ayuu is weydiiyay, inkasta oo, uu si fiican u ogaa sida ay ogayd.
“Well, a, I, kaliya la malayn karo. Waxaad u eg qareen. Sid waa nooca eey qareen lahaa. Your guri, sidoo, waxa aan arkay waxaa ka mid ah, u eg nooca meesha qareen ku nool lahaa.”
“Laga soo bilaabo waxa aad ka aragtay waa lagu burburin karo ee ay khuseyso jumladda.”
'Donët aan musqusha iloobin, iyo–“
“Taasi waxa ay ahayd! Ma aanan arkin–“
“MARINKA ka deyr ku suuliga, oh iyo qol aad u lahaa in iyada oo loo marayo socdaan si aad u hesho musqusha.”
Oo iyana waxay qabtay in isaga la joojiyo. Si aad isaga ka Shuqlinayn. “Haa, waxa uu ahaa xamaamka, Roob iyo musqusha. Waxay ahaayeen abaalgudka dhintay. Waxayna dheheen Magacaana qareen’ dhan u taliya.” Oo haddana way ka jeedsadaan. “Waxaan iska illowday arrintii musqusha.”
“Huuuuuum. Ii Aan,” ayuu yiri dhoola.
Hadda ilaa iyo dhanka bari iyo ku dhow jeedo ee galbeedka, eeyaha si farxad jidka guriga ay, Nina iyo Daniel ku soo dhacday galay jeexdin socodka ah. Waxay ahayd daqiiqo ka hor Labadooda hadlay.
“Oo trombone,” ayuu yiri Daniel.
“My trombone, Waxaan is-idhi.”
Nina ee dareemi karaa qalbigeeda ku garaaceen sida durbaan in Afar jazz ah. “Waxaad, a, trombone play?”
Waxa uu fiiriyey iyada daqiiqad ah, iyo waxba yiri. Markaas, ka dib waxa u muuqatay sida saacadood, ayuu is weydiiyay, “Waxaad jeceshahay jazz?” weydiiyay Daniel.
“Sure, haa. Waxaan filaayaa.” Her wadnaha tegey dabin in Bass. Waxa uu sidoo kale doonayo inuu iyada soo baxay weydiin ama iyada u ogaato.
“Waxaad ka fikirtaa in aad jeclaan lahaa inay i raacaan si ay u maqlaan Slide Hampton? Waxa uu ugu Vanguard iyo ciyaaraa trombone xooggan. Waxaad jeceshahay trombone, aadan sameyn.”
Ma uu weydii su'aasha ah, sidaa darteed, iyadu ma ay jawaabin. “Waxaan wax fikrad ah kama waxaa jiray trombonists jazz star.”
“Waxaa jira trombonists boosaska laakiin, Xiddigaha lahayn. Turumbooyin, saxes, Dabcan, laakiin trombones aan waligood ay u sabab ah. Trombone waa geeska looma eego. Sure, Faransiiska oo geesaheeduna isku leeyihiin music classical, tubas leeyihiin guutooyinkiisa oo gaardiskii, iyo turumbooyin course iyo saxes meel kasta, waqtiga oo dhan. Laakiin trombone ah? Waa geeska illowday, aamusiyay, soulful, walaalkiis ruuxiga ah ee buunka.”
Waxay ahayd mesmerized by rabitaankiisa.
“Sidaas, aad rabto inaad tagto maqlo mid ka mid? Dhab ahaantii shan? Hampton ee isugu wada joogaan trombone ah. Waxa ay noqon doontaa wax. Oo waxay ila noqotay tan aad lahayd sida danta ah, sidoo, aad rabto in laga yaabo inay u yimaadaan.”
“Well, haa, hubisaa, laakiin, Waxaan ula jeedaa anigu runtii ma samayn haveÖ”
“Caawa?” Waxay u maleeyeen in daqiiqad ah oo wax xusuustay. Waxay nafteeda ku dhacay iyada hip. “Aw, samayn ma, Waxaan caawa karin.” Claire oo soo socda in ka badan oo aysan burin lahaa saaxiib ah nin. Xitaa ninkaan.
“Okay, sida ku saabsan berri? Waxay noqon doontaa qiyaastii dhowr maalmood. Kooxda hore waa sagaal. Waxaan cuni kari koowaad.”
Oh ilaah. Oh jeez. Oh haa! Oo qorraxdii waxay ku lahaa oo kaliya fuulay treetops iyo iyada dareemi karo dugaal on wejigeeda. Eeyaha ayaa si farxad dhuuqista hawada aroortii cusub oo haddii aan ogaan fiican uma ay, Tani waxa ay ahayd nolosha! Tani waxa ay ahayd aroortii kaamil ah kaamil ah. Fiiri! Eeg! Life toobad dumaya.
“Well,” waxaa dhan ayay la odhan karaa.
Waxay gaadhay dhinaca bari.
“Ma in a 'iyo sidoo kale, haa '?”
“Well, Okay,” iyada articulately jawaabay.
“Waxaan qaadan doonaa in ay haa tahay a. Waxaan aad doona ilaa?”
Waxa ay lahayd in laga fikiro dhakhso, sidaas oo raba in ay ka fogaadaan 'taariikhda caadiga ah’ habab ah oo la dhunkashada, sidaas si la hadasho, dhimashada. “Waxaan halkaas waxaad kula kulmi kartaa?”
“Sure, aad u ogaato meesha ay tahay? Toddobaad iyo kow iyo tobnaad, Kooxda waqooyiga, meel aad u yar. Okay Todoba iyo soddon?”
“toddobaadna iyo kow iyo tobnaad?” Waxay is beddelayo la gabax ee aan ogayn tuulada.
“Toddobaad Avenue iyo kow iyo Street.” Markaasuu Muusooday.
Waxay u dhiibay si ay u muujiyaan waxa ay ahayd mid soo socda. “Ugu todoba iyo soddon,” Waxay ku celisay,, in faraxsanahay ah, Cabsan, sakaraadkii la maansheeyey.
“Good. Hadda waxa aan rabaa in aan tago. Qaar naga mid ah u shaqeeyaan nool a, aad u ogaato.” Markaasuu Muusooday, kaftan. “Just dhalmada!” Markaas iyada dhudhun ayuu taabtay gacanta ku. “Waxaad eeg, berrito, xaq u? Habeen A of trombones.”
Waxay taabtay rigoore uu markaa uun soo taabtay, oo wuxuu ku yidhi, “Haa.” Waxay noqotay ah taariikhda-o-nacasnimadooda, a date-a-phobe, taariikhda loolan. Waxay geliyey taariikhda la Daniel ku haysa ugu sareeya ee loo yaqaan Dadkaba, ku dhawaad ​​u sarraysaa sida Mount Everest, waana adag tahay in neefta in ilaa hawada khafiif ah waxaa. Waxaa xitaa jiri kara nafta halis. Mid ka mid ah talaabo taxadar la'aan iyo aad ka heli karto naftaada ku dhacaan. In jacaylka iyo / ama in aad dhimato.
Oo isna wuxuu downtown si deg deg ah u noqday la Sid oo bilaabay in ay u ordaan oo ahayd hortiisa. Laakiin Nina lahaa waqti ku filan si ay u noqon, iyo daawan dhaqaaqo jirka ee uu ka gaab uu, addimmadiisa muruqa iyo garbaha, iyo hawo u qaataan in oo ha ka baxay, dhawaaneysa indhaheedii, arkay iyada haysta iyada iyo dhunkashada iyo ñ
Laakiin iyada guuto doggie cad jiido iyada dib u miyir qaba itaalkooda oo dhan,, oo ay ku socdeen jidka xaggii guriga ay.
Waxa uu ku orday sida dabaysha, sida kari lahaa haddii uusan horay u hoggaamin jiray shan mayl. Waxa uu dareemay sare, inkastoo Dhawa waa ogaaday waxa dareemay in sida, waxay ahaayeen Horay college tan iyo markii uu isaguna. Oo isna wuxuu dareemay faraxsanahay, inkastoo Dhawa waa ogaaday waxa dareemay in sida, ay si muddo dheer tan iyo markii uu isaga qudhiisu ha dareemaan. Oo iyana waxay gabar la yaab leh sida a, Billy waxaa fekerayo. Laakiin weyn, waxaa la kuwa eeyaha cad. Wax iyada ku saabsan, gacmaha xoog, indhaheedii bay qurxoon, afka iyada, nuglaanta aan la filayn, furfurnaanta ah, wax isaga ka soo reebtay. Oh wiil, tani ma dhacaya ahaa, waxa uu ahaa? Maaha hada xiligan, ma sida Daniel, ma la gabdhaan maraq oo ahaa a Mucjizaad cad Peeping Tom iyo laguma laha ah, in Boot. Waxa uu sidoo kale inuu ku Dhici, jacayl iyada la leeyihiin ama inay qabtaan iyada ama labadaba. Oo wakhtigii la soo dhaafay in happenedóthe dhicin in wax jacaylka, ma xadhiga thingóit dhamaantood ku dhamaaday oo aad u xun. Taasina waa sida naftiisa. Sug illaa ay baranayaan, haddii waxa uu helo in ilaa hadda, oo uu run ahaantii yahay iyo waxa uu run ahaantii. Qareen u xuntahay. Laakiin wakiilka IRS ah? From aragnimo uu ku ogaa inay og in horay waa wax dumar ah oo karo caadaysteen in ay, laakiin la yaabay ag waa wax aysan heli lahaa.
Waxaa laga yaabaa markay u sii socotay isaga oo keliya maxaa yeelay, iyadu u maleeyo in uu yahay Daniel! wuu ka yaabay. Daniel ee photos ka, aqal ee kubadheysashada, eey ugu fiican?
Sidee ayay u ogaan Daniel ahaa qareen, si kastaba? Malaha galayo in bigmouth Pete iyada sheegay. Ama haddii kale, waxay akhriyaan qaar ka mid ah wararka ama mail ama tiro ka mid ah waxyaabaha kale ee gurigu waa in weli ay marti u siin lahaa. Wax wanaagsan buu ahaa si taxadir si ay u qariyaan uu xirfad dhab ah iyo aqoonsiga. Waxayna ahayd xasee. Waxay furay kiiska trombone ah. Waxay suurka waana soo geliyey xirayn. Waxay ka dheregtay in uu saxan qubeys. Yaa ogaaday waxa Nina this awoodna? Ma ayay leeyihiin xad lahayn?
Uu ku ogaa oo dhammuna waxay ahayd in marka xigta, wuxuu rabay in la xamaamka in iyada la.
Markii Nina socon eeyaha iyo markaas iyaga helay guriga, cagaheeda ayaa dhiig ka toddobada meelood oo kala duwan. Saddex on cagta midig iyo afar bidixda. Waxay qarkii sariirteeda fadhiistay, fikirayso waxa nacas ah waxay ahayd, halka codsanaya qalabka peroxide hydrogen iyo band, sida Sam dutifully leefleefay guntooda cagaheeda. Haa Daniel ayaa ogaaday heróyou'd waa in la Helen Keller ma toóbut uu ogaa qubayska. Wuxuu ogaa oo ku saabsan trombone ah.
Laakiin uu dhab ahaantii iyada ka soo weydiiyey. Oo iyana waxay ugu sameeyey dhici. Ma Hadda waxa laga dhawaajiyo, ayay halis ah ayaa sheegay in haddii ay ahayd iyada hooyo, Iyadoo lagu tilmaamayo taariikhda, ma trombone ah.
Waxay Neef dheer ku qaatay, isku dayaya in ay xusuustaa in t-shirt in uu armaajo la caraf musky ay.